Nea enti a Onyankopɔn Bɔɔ Yɛn
KENKAN WƆ Abbey Abui Acholi Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ateso Attié Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Betsimisaraka (Southern) Bislama Bolivian Sign Language Boulou Bété Cambodian Chavacano Chichewa Chin (Tiddim) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chopi Chuabo Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Cuban Sign Language Damara Dangme Douala Drehu Dusun Dutch Efik English Estonian Ewe Fante Fijian Fon French Ga Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guianese Creole Gun Guéré Haitian Creole Hausa Herero Hindi Hunsrik Iban Ibinda Igbo Indian Sign Language Indonesian Irish Javanese Jula Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Lhukonzo Lingala Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Mazahua Mbunda Meru Moore Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Nigerian Pidgin Nyungwe Nzema Okpe Oromo Otetela Pidgin (Cameroon) Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Quichua (Santiago del Estero) Rapa Nui Romanian Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Seychelles Creole Sidama Silozi Sinhala Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Thai Thai Sign Language Tigrinya Tiv Tongan Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Wichi Wolaita Yacouba Zande Zulu
SƐ WOKENKAN atesɛm krataa, wohwɛ television anaa wotie radio a, nea ɛrekɔ so ara ne nsɛmmɔnedi, akodi ne amumɔyɛsɛm. Yɛreka yi, ebia yare bi reteetee wo anaasɛ wo ho nipa bi a wopɛ n’asɛm paa awu.
Bisa wo ho sɛ:
Asetena wei na Onyankopɔn pɛ sɛ me ne m’abusua fa mu?
Mɛyɛ dɛn agyina me haw ano?
Yebenya asomdwoe ankasa da bi?
Bible ma yenya nsɛmmisa yi ho mmuae a ɛtɔ asom.
BIBLE MA YEHU SƐ ONYANKOPƆN BƐYƐ ANWONWADE PII WƆ ASASE SO.
Obiara rente yaw, ɔremmɔ akwakoraa anaa aberewa na ɔrenwu.—Adiyisɛm 21:4
“Apakye behuruw sɛ ɔforote.”—Yesaia 35:6
“Anifuraefo ani bebue.”—Yesaia 35:5
Wobenyan awufo aba nkwa mu bio.—Yohane 5:28, 29
Obiara renyare.—Yesaia 33:24
Obiara benya aduan adi amee.—Dwom 72:16
SUA BIBLE NA ƐBƐBOA WO
Anhwɛ a wobɛka sɛ nea woakenkan wɔ nhoma yi mfiase no yɛ anansesɛm. Nanso Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ ɛrenkyɛ koraa ɔbɛma nsakrae yi nyinaa aba asase so. Bible ma yehu ɔkwan a ɔbɛfa so ayɛ saa.
Nanso ɛnyɛ wei nko ara na Bible ka ho asɛm. Ɛka nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ na ama yɛanya anigye ankasa wɔ asetena mu seesei. Wo deɛ gye bere kakra susuw wo dadwen ne wo haw ho hwɛ. Ebia wo sikasɛm nkɔ yiye anaa worehyia ɔhaw bi wɔ w’abusua mu. Yare reteetee wo anaa wo ho nipa bi a wopɛ n’asɛm paa awu. Bible betumi aboa wo ma woagyina ɔhaw yi nyinaa ano na woanya abotɔyam. Ebetumi nso ama woanya nsɛmmisa a edidi so yi ho mmuae:
Yɛbɛyɛ dɛn agyina yɛn haw ahorow ano?
Enti yɛn abusua betumi anya anigye?
Yɛn nkurɔfo a wɔawuwu no, yebehu wɔn bio?
Adɛn nti na yegye di sɛ Onyankopɔn bɔhyɛ nyinaa bɛba mu?
Nhoma yi a worekenkan no kyerɛ sɛ wopɛ sɛ wusua biribi fi Bible mu. Nhoma yi bɛboa wo paa. Wokenkan nkyekyɛm biara a, wubehu ɛho nsɛmmisa wɔ kratafa no ase, na ɛbɛma woate Bible no ase yiye. Nnipa ɔpepem pii ani gye Bible a wɔne Yehowa Adansefo resua no ho. Yenim sɛ wo nso w’ani begye ho. Yɛsrɛ sɛ Onyankopɔn nhyira wo na hu nokwasɛm a ɛwɔ Bible mu!
HU BIBLE NO YIYE
NHOMA ahorow 66 na ɛka bom yɛ Bible no. Wɔakyekyɛ mu ayɛ no ti ne nkyekyɛm sɛnea ɛbɛyɛ a ne bue renyɛ den. Sɛ wuhu kyerɛwsɛm bi wɔ nhoma yi mu a, Bible mu nhoma no din na edi kan. Nɔma a edi so no yɛ nhoma no ti, na nɔma a edi hɔ no kyerɛ nkyekyɛm. Nhwɛso bi ni: “2 Timoteo 3:16” kyerɛ Timoteo nhoma a ɛto so mmienu, ti 3, nkyekyɛm 16.
Sɛ wuhu kyerɛwnsɛm wɔ nhoma yi mu na wubue wo Bible kenkan a, ɛrenkyɛ koraa na woahu Bible mu. Afei, wubetumi afi ase akenkan Bible no da biara. Wokenkan ti mmiɛnsa kosi nnum da biara a, wubetumi de afe baako pɛ akenkan Bible mũ no nyinaa awie.